DAAWO: ”Haddii Maraykan dhankeenna usoo dhaqaaqo madaxa ayaan ku dhufanaynaa.” – Iiraan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: ”Haddii Maraykan dhankeenna usoo dhaqaaqo madaxa ayaan ku dhufanaynaa.” – Iiraan
DAAWO: ”Haddii Maraykan dhankeenna usoo dhaqaaqo madaxa ayaan ku dhufanaynaa.” – Iiraan
(Tehraan) 13 Maajo 2019 – Joogitaanka Ciidamada Maraykanka ee Gobolka Gacanka ayay dadka qaar halis u arkaan, balse Iiraan ayaa sheegtay inay u aragto “fursad qaali ah,” sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada Ilaalada Jamhuuriga dalkaasi.
Amirali Hajiadeh, oo ah taliyaha qaybta cirka ee ciidankaasi ayaa warkan sheegay mar uu ka hadlayey Ciidamada Maraykanka ee iminka hoganaya gobolka, kuwaasoo lagu soo xoojiyey maraakiib dagaal oo dayuuradaha xambaara.
“Markabka dayuuradaha qaada wuxuu sidaa ugu yaraan 40 ilaa 50 dayuuradood iyo ilaa 6000 oo ciidan ah, waagii hore waan ka cabsan jirney oo halis waannu u arkayney,” ayuu u sheegay Wakaaladda Wararka Ardayda dalkaasi (ISNA).
“Balse haatan, halistaasi waxay isu beddeshey fursado,” ayuu raaciyey. Hajiadeh ayaa ka hadlay in Iiraan ay haatan leedahay awood ay ku beegsato markab kasta oo dayuurad sida oo badda sabbaynaya, fogaan dhan 300 ilaa 700 km.
”Haddii ay iyagu [Maraykanku] dhankeenna usoo dhaqaaqaan madaxa ayaan ku dhufan doonnaa.” ayuu ku falax gooddiyey.
Maalin dhowayd bay ahayd markii uu daroon ay Iiraan leedahay uu inta dul tegey sawirro dhow kasoo qaaday markab dagaal oo dayuurado xambaarsan oo uu Maraykanku leeyahay.
Previous articleMaxkamadda Garoowe oo adeegsatey farsamo naadir ku ah Afrika, dalkana aan laga helin
Next articleRAKADII AAN LA RAKIBIN: Rakadii loogu tala galay inay Reds koobka ku qaaddo oo khasaartay! + Sawirro